မြေပုံနယ်နိမိတ်မှာ ထိုးထွက်လာသော ခြံစည်းရိုးများ - ၂
''အမေရိကန်ဆိုတာ တခြားနိုင်ငံတွေက ပြဿနာတွေ လာပုံရမယ့် အမှိုက်ပုံမဟုတ်ဘူး''ဟု တရုတ်-အမေရိကန် ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ Jenny Cheung က ဆိုလိုက်၏။ Cheung သည် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်က အမေရိကန်သို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ရခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အသက် ၂၅နှစ် အရွယ် ဃ့နကညါသည် ယခုအခါ ဝက်ဘ်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူဖြစ်ကာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ဒုက္ခသည်များ တားမြစ်သည့်မူဝါဒအပေါ် ရှားရှားပါးပါး ထောက်ခံလာသည့် တရုတ်-အမေရိကန်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
Cheung သည် Chinese Americans For Trump (CAFT) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်၏။ နိုင်ငံအနှံ့တွင် CAFT အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၇ဝဝဝ ခန့်ရှိပြီး အများစုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ခန့်က အမေရိကန်သို့ ရောက်လာကြသော တရုတ်လူမျိုးများဖြင့် စုစည်းထားသည်။
ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်တွင် ထရန့်က စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဆီးရီးယားအပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများမှ လာရောက်ကြသည့် ဒုက္ခသည်အားလုံးကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီး မွတ်စလင် အများစုနေထိုင်သည့် နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံကိုလည်း ခရီးသွားလာဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့၏။ လုံခြုံရေးအတွက် ယာယီပိတ်ပင်မှုဟု ဆိုသော်လည်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာများ၊ နိုင်ငံအများအပြားနှင့် အမေရိကန်သား အချို့ကိုယ်တိုင် ကန့်ကွက်ခဲ့သော စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်တွင် ခင်ပွန်းသည်၊ ကလေးနှစ်ယောက်နှင့် အတူနေထိုင်နေသော Cheung က ''အမေရိကန်ဆိုတာ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူတွေရဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတာ လူတိုင်းနားလည်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပဲ တရားမဝင် ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနယ်စပ်ဖြတ်ပြီး ကျော်ဝင်လာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး''ဟုဆို၏။
ထရန့်က နိုင်ငံပြင်ပမှ အလုံးအရင်းဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ရေးအတွက် နယ်စပ်ပိတ်ပင်မှုကို ထောက်ခံသည့် Cheung ချန်မိသားစုကိုယ်တိုင် တရုတ်နိုင်ငံ ဂွမ်ဒေါင်သို့ ပြန်ခွင့်ရရန် ဗီဇာကို ရှစ်နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရဖူးသည်။ Cheung နှင့် မိသားစုသည် အမေရိကန်အိပ်မက်အတွက် နှစ်ရှည်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။
သူကအမေရိကန်အိပ်မက်အတွက် အခြားသူများက ကြားဖြတ်ကာ ရှေ့ ဆုံးမှဝင်ရောက်တန်းစီခွင့် ရှိသင့်ပါသလားဟု ထရန့်ဘက်မှ ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Cheung သည်လည်း တစ်ချိန်က အမေရိကန်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေများအောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ သူက အမေရိကန်သည် စစ်အေး ခေတ်ကာလများအတွင်း၌ ကွန်မြူနစ်တိုင်းပြည်များမှ နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်များကို အနည်းငယ် ကြောက်လန့်သော်လည်း လက်သင့်ခံခဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ယခု ထရန့်ရင်ဆိုင်ရသည့် အရေးအပေါ်တွင် ISIS များအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်မျက် နှာဖုံးတပ်ကာ အမေရိကန်အတွင်းသို့ ထရိုဂျန်မြင်းလို ဝင်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထရန့်သည် သူ့နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် လုံခြုံရေးရှုထောင့်မှ စောင့်ရှောက်ပေးဖြစ်ကြောင်း၊ အချို့က ထရန့်မူဝါဒကို လက်မခံဟုဆိုသည့်တိုင် ဤလုပ်ရပ်သည် လူမျိုး ခြားမုန်းတီးမှုဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း Cheung ပြော၏။ ''သင့်အနေနဲ့ လူတိုင်း ပျော်ရွှင်မှုရအောင် အမြဲတမ်း ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး''ဟု ပြောလိုက်သေး၏။
ထရန့်၏ ဒုက္ခသည်များ ယာယီတားမြစ်သည့်ဥပဒေတွင် ဆီးရီးယား၊ အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ ဆိုမာလီးယား၊ ဆူဒန်နှင့် ယီမင်တို့ ပါဝင်သည်။ တစ်ဖက်တွင် အီရတ်နိုင်ငံကလည်း အီ ရန်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား၊ ဆိုမာလီးယား၊ ဆူဒန်၊ ယီမင်တို့မှ နိုင်ငံသားများ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို တားမြစ်ထားသည့်အတွက် ထရန့်နှင့်အီရတ်တို့ ဤနေရာတွင် အမြင်ချင်းတူသလို ဖြစ်နေသည်။
မိမိနိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသားများ ပိတ်ပင်မှုသည် ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်၌ ချိန်ခွင်လျှာ တစ်ဖက်စောင်းနေသည့် အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ပေ။ မိမိနိုင်ငံနှင့် မသင့်မြတ်ဟုထင်လျှင် မ လျော်ကန်သော်လည်း ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်ကြသော ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် တွေ့ ရမည်။
ထရန့်ပိတ်ပင်ခဲ့သော နိုင်ငံများအပါအဝင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘရုနိုင်း၊ မလေးရှား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အီရတ်၊ ကူဝိတ်၊ လက်ဘနွန်၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျ၊ အာ ရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစသော မွတ်စလင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံကလည်း မိမိတို့ နယ်နိမိတ် အတွင်းသို့ အစ္စရေးများ ဝင်ရောက် ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားပြန်သည်။ ဤ သည်ကိုကြည့်လျှင် နိုင်ငံများအကြား စည်းရိုးများ ထွက်ပေါ်လာရသည့် အ ကြောင်းခြင်းရာများအနက် တစ်ချက်ဟု ဆိုနိုင်မည်။
ဘက်မတူသည့်အတွက် ကာရံဟန့်တားကြသည်။ အသွင်မတူ၍ စည်းခြားကြသည်ဟု လွယ်လွယ် ကောက်ချက်ချ၍မရပေ။ အကြောင်း မှာ အစ္စရေးများ ဝင်ခွင့်မရှိဟု ထာဝရ ပိတ်ပင်ထားသည့် မွတ်စလင်နိုင်ငံ ၁၆ တို့အကြား၌ပင်လျှင် ခြံစည်းရိုးများက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ သုံးသပ်သူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးက တံတိုင်းများ၏ ပြိုလဲပုံ၊ စည်းရိုးများ ကျိုးပျက်ပုံများကို သမိုင်းနှင့်ချီကာ ပမာပြရင်း မအောင်မြင်ကြောင်း ကျမ်းအသွယ်သွယ်ကို အကျယ်ကျယ် ရေးသားနေသည့်တိုင် အသစ်ဖြစ်လာသော တံတိုင်း/ခြံစည်းရိုးများအနက် အနည်းငယ်မျှသာ ပြန်လည် ဖယ်ရှား ကြသည်မှာလည်း အမှန်ပင်။
ဘာလင်တံတိုင်းကိုဖြိုချကာ ဆွေးမျိုးရင်းချာအချင်းချင်း ပြန်လည် ထွေးဖက်ခွင့်ပေးပြီးနောက် နိုင်ငံတကာတွင် တိုးထွက်လာသော တံတိုင်း/ခြံစည်းများနှင့် မကင်းသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၆၄ နိုင်ငံမက ဖြစ်လာ ခြင်းမှာ စာချုပ်စည်း၊ မြေပုံစည်း များလောက်နှင့် မလုံလောက်တော့ကြောင်း သက်သေပြနေသည့် အလားပင်။
(ဤဆောင်းပါးနှင့်အတူ ပူးတွဲပါသည့်) ၁၈ဝဝပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်မှ ၂ဝ၁၄ခုနှစ်အထိ နှစ်နိုင်ငံအကြား တည်ဆောက်ခဲ့သော တံတိုင်း/ ခြံစည်းရိုးများ စာရင်းကိုကြည့်လျှင် ဆိုဗီ ယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲပြီးနောက်ပိုင်းနှင့် စစ်အေးကာလကုန်ဆုံးစေသည့် ဘာလင်တံတိုင်းပြိုကျမှု နောက်ပိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော တံတိုင်း/ ခြံစည်းရိုးများအနက် အများစုသည် နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများ၏ရန်မှ ကာကွယ်ရန် ဆက်လက်တည်မြဲနေဆဲ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့အတွက် ခြံစည်းရိုးသည် ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့အစည်းများက မနှစ်သက်သည့် ကိစ္စဖြစ်သည့်တိုင် နိုင်ငံ သားမဟုတ်သည့် လူမျိုးစုများ အ လွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိစေရန် ကာရံသင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိ သည်။
ယခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မြို့နယ်သုံးမြို့နယ် အရေးကိုကြည့်လျှင် စည်းရိုးအပြည့်မရှိခြင်းနှင့် အဖြစ် သဘောမျှသာရှိသော စည်းရိုးမျိုး ကာထားခဲ့ခြင်းက ထောက်ပြရမည့် တစ်ခုတည်းသောအချက်ဟု မဆိုနိုင်စေကာမူ ထည့်တွက်ရမည့် အရေးပါသော အချက်အနေဖြင့်ရှိနေလိမ့်မည်။ အကယ်၍သာ အခိုင်အမာ ပိုင်းခြားနိုင်ခဲ့လျှင် နိုင်ငံသားမဟုတ် သူများအပေါ် အကျိုးအမြတ်ရှာတတ်သော ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံရေး ပါတီ၏ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုများ နည်းပါးခဲ့နိုင်သလို နိုင်ငံတကာနှင့် စိတ်ကွက် စရာဖြစ်မည့် အထင်အမြင် မှားမှုများလည်း အထိုက်အလျောက် သက်သာစေနိုင်သည်။ အစ္စရေး၊ ပါလက်စတိုင်းအကြား ကာထားသည့် အုတ်နံရံမျိုး မဟုတ်ဘဲ အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စ တန်ကြား ကာထားသည့် စည်းရိုးမျိုးရှိခဲ့လျှင် ယခုလောက် အန္တရာယ် များမည်မဟုတ်။
အဟန့်အတား မယ်မယ်ရရမရှိသဖြင့် ဝင်လာသမျှသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် လွယ်လွယ်လိုချင်ခဲ့ကြပြီး၊ ပြန်ထွက်သွားကြသည့်အခါတွင်လည်း အားလုံးက နိုင်ငံတကာ မီဒီယာနှင့်အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများအ ကြိုက်မြန်မာပြည်မှ ထွက်ပြေးလာရ သောသူများဟုသာ အမည်တပ်ကြ လေသည်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ထွက် ပြေးသူပေါင်း လေးသိန်းရှစ်သောင်း အထိရှိပြီဟုဆိုရာက တစ်ကြိမ်တွင် ဘီဘီစီ သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ရှစ်သိန်းခန့်ဟုပင် ဖော်ပြလာပြန်သည်။ ARSA အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သော နယ်မြေရှင်းလင်းမှုများ ရပ် ဆိုင်းပြီးနောက် တစ်ပတ်ကျော်အကြာတွင် ဖော်ပြသော လေးသိန်းရှစ် သောင်းဟူသည့် ကိန်းဂဏန်းသည် တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း လေးသိန်း မျှထပ်တိုးသွားသည်မှာ အံ့သြစရာကောင်းလှပေ၏။ စည်းရိုးအားနည်းခဲ့သဖြင့် ဝင်ချင်တိုင်းဝင်ခဲ့သူများ ပြန်ထွက်ချိန်တွင် မိမိသဘောဆန္ဒ အလျောက် ပြည်တော်ပြန်ကြသူများ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ စက်လှေများဖြင့် အခေါ်လွှတ်၍ လိုက်သွားကြသူများသည် မြန်မာ့မြေမှ လွတ်သည်နှင့် အားလုံးသည် ထွက်ပြေးကြရရှာသော ဒုက္ခသည်ချည်းသာ ဖြစ်နေတော့သည်။ ထိုသို့သော ကမောက်ကမှု များ ဖြစ်ပွားလာသည့်အခါ နှစ်နိုင်ငံအကြား မလိုလားအပ်သည့် ခြံစည်း ရိုးများ အခိုင်အမာထားရှိရန် တောင့်တလာကြသည်မှာ မဆန်းလှပေ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံအများစုသည် UNHCR ကဲ့သို့သော ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းအများနှင့် ၁၉၅၁ခုနှစ် ဒုက္ခသည် သဘောတူ ညီချက်အစရှိသော အကြောင်းတရားများကို အခြေပြုကာ ဒုက္ခသည်များကို ကာကွယ်ပေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယသည် နိုင်ငံ့နယ်စပ်သို့ ရောက်လာသော ဘင်္ဂါလီများကို ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဖြူး၊ ကျင်စက် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ကာ အနားမကပ်နိုင်အောင် တားဆီးကြသည်။ အကြောင်းမှာ အိန္ဒိယသည် ဘင်္ဂါလီများကို ဒုက္ခသည်များဟုမမြင်။ တရားမဝင်ရွှေ့ ပြောင်းသူများသာဟုသာ မြင်သည့်အတွက် ခြံစည်းရိုးနားမကပ်နိုင် အောင် ဟန့်တားနေခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ရာဂျနက်သ်ဆင်းက ဘင်္ဂါလီများသည် ဒုက္ခသည်များမဟုတ်ဘဲ ခိုးဝင်သူများသာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဆင်းက အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဘင်္ဂါလီများအား ကူညီရ မည်ဟု ဆိုသည့်စကားကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုရာတွင် ''ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခြားနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းကို မပြောခင်မှာ ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း စဉ်းစားဖို့လိုတယ်''ဟု ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂါလီများသည် ဒုက္ခသည်တို့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို တစ်ခုမှ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသည့်အပြင် မည်သူကမျှ ခိုလှုံခွင့်ကို စနစ်တကျ တောင်းခံခြင်းမရှိသည့်အတွက် သူတို့သည် တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းသူများသာ ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂါလီများကို ပြန်နှင်ထုတ်ခြင်းသည် ၁၉၅၁ ဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်နှင့် မသက်ဆိုင်သလို အိန္ဒိယသည် နိုင်ငံ တကာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းလည်း မဟုတ်ဟု ဆင်းက အခိုင် အမာဆိုသည်။ အိန္ဒိယသည် ဘင်္ဂါလီ များကို အဝင်မခံသော်လည်း စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘင်္ဂါလီများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပေါင်း ၅၃ တန်မျှကို ပေးလှူခဲ့သည်။ ဘင်္ဂါလီများသည် နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် ပတ်သတ်မှု ရှိနေသည်ဟုလည်း အိန္ဒိယက ယုံကြည်ထား၏။
Channel News Asia အင်တာနက် စာမျက်နှာထက်တွင် တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Fleeing Rohingya Fighers accept suffering and exile in exchange for world’s attention ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတွင် မူရင်းဆောင်းပါးရှင်နှင့်တွေ့ခဲ့သော ARSA ၏ ဒုတပ်မှုးတစ်ဦးဟုဆိုသူ ဟာမစ်ရာဖစ်က ထွက်ပြေးခဲ့သူများထဲတွင် ARSA အဖွဲ့ဝင်များလည်းပါဝင်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထွက်ပြေးကြသည့်အတွက် ဒုက္ခသည်များဟု အမည်တပ်လျှင် ထိုသူများအကြား အကြမ်းဖက်သမားများ ရောပါနေ သည်ကိုလည်း ARSA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်သလိုပင်။
Asia Time တွင် ဆောင်းပါးရှင် ဘာတေးလစ်တနာ ရေးသားခဲ့သော The Truth Behind myanmar’s Rohinga insurgency တွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရွာသားများနှင့် ရောနှောကာ အရပ်သားများကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော ARSA အကြမ်းဖက်သမားများ၏ လုပ်ရပ်သည် မလေးရှား-ထိုင်း နယ်စပ်မှ မွတ်စလင်သူပုန်များ၏ လုပ်ရပ်နှင့် ပိုတူသည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ARSA အဖွဲ့က သူတို့သည် ISIS, Lashkar-e Taiba နှင့် အခြားသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သတ်မှုမရှိဟုဆိုသည့်တိုင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လေ့လာ သုံးသပ်သူများနှင့် အကြမ်းဖက် ဝါဒဆန်းစစ်ရေးအပေါ် ကျွမ်းကျင်သူများက ARSA သည် ပါကစ္စတန်အပါအဝင် အခြားသောနိုင်ငံမှ အစွန်းရောက်သမားတို့နှင့် ကင်းလိမ့် မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ထားကြ၏။
ARSA ၏ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဖစ်တိုသည် ကရာချိတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ အစ္စလာမ်သာသာရေးကျောင်းတွင်ပညာ သင်ယူခဲ့သည်။ ARSA ၏ မူလ အမည်မှာလည်း Harakah al-Yaqin ခေါ် The Faith Movement ဖြစ်သည့်အတွက် မူလကတည်းက ဘာသာရေးဂယက်နှင့် မကင်းသော အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ပြီး ရခိုင်မှ ဘင်္ဂလီများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သည်ဟူသော ကြွေးကြော်သံမျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရမည်။ ARSA အမည်ကိုမူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ အခြားသော တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့်တူစေရန် ယခုနှစ်မတ်လတွင်မှ ပြောင်းလဲ့ခဲ့သည်။
ဘာတေးလစ်တနာ၏ ဆောင်းပါးတွင် ARSA မှ ကျန်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ပါကစ္စတန်သား အဒူကာဒိုဘာမီသည် တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံအား ဂျီဟတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွဲရန် လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့် ကြေညာခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် အူစမာဘင်လာဒင်၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ၁၉၈၇ ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သော Lashkar-e-Taiba ခေါ် Army of Righteous အဖွဲ့နှင့် ပတ်သတ် ကာ တစ်ကြိမ်တွင် ယင်းအဖွဲ့မှ အဓိပတိဟာမစ်မိုဟာမက်ဆာယက်နှင့်အတူ အစည်းအဝေးတက်နေပုံ များ ပေါ်ထွက်ခဲ့သေးသည်ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။
စက်တင်ဘာ ၈ ရက်က Free Malaysia Today (FMT) အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာကိုဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေသည့် ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက် သမားများနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသားများ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုရှိမရှိ သတိဖြင့်စောင့်ကြည့် စုံစမ်းနေသည်ဟု ရေးသားထား၏။ မလေးရှားတော်ဝင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တည်ရာ ဘူခစ်အမန်းမှ အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအကြီးအကဲ အယိုခန်းမိုင် ဒင်ပ်စ်ချေးက မလေးရှား မူဂျာဟစ်ဒင်များသည် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၂ အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အန်ဘွန်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ခရစ်ယာန်-မွတ်စလင်ပဋိပက္ခနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှလက်ရှိ ပြဿနာများအပေါ် ပုံစံတူအဖြစ် ရှုမြင်နေနိုင်ကြောင်း၊ အန်ဘွန် တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် မလေးရှားတွင် ဒီဗီဒီ ဝါဒဖြန့်ချိခွေ များဖြန့်ကာ လူသစ်စုဆောင်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသလို ယခု မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီအကျပ်အတည်းသည်လည်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်နေနိုင်ကြောင်း၊ အင်တာနက်သည် အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အထိ နောက်ဆုံးဝါဒဖြန့်ချိရေး စနစ်တစ်ခုဖြစ်သလို ISIS တို့၏ လူသစ်စုဆောင်းရေး ယန္တရားလည်း ဖြစ် သည်ဟုဆိုသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်က FMT အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ဖော်ပြချက်တွင် ရဲချုပ်အယိုမန်းက လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျီဟတ်စစ်ပွဲဆင်နွဲရန် ကြိုးပမ်းနေ သည့် အင်ဒိုနီးရှားတစ်ဦးကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ဖူးသည်ဟုဆို၏။ ယခုအချိန်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကြမ်း ဖက်မှုများပြုလုပ်ရန် လူအင်အားစုဆောင်းသည့်ကိစ္စများအပေါ် သတင်းအစအနများ လိုက်လံစုဆောင်းစုံစမ်းလျက်ရှိရာ စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်က မာလက္ကာမှ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် လူတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းရန် သံသယရှိသဖြင့် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အစပိုင်းတွင် မလေးနှင့် အင်ဒိုနီးရှားမှ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ARSA နှင့်သွားရောက်ပူး ပေါင်းရန် ထွက်ပေါက်မတွေ့ဖြစ်နေ ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Free Malaysia Today က ARSA နှင့် ပူးပေါင်းလိုသည့် မလေးရှား တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ထိုင်းမှတရားမဝင် မြေအောက်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကြခြင်းဖြစ်နိုင် သည်ဟု အကိုးအကားနှင့် သုံးသပ်ပြသည်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခိုးဝင်လိုသူများသည် ရေလက်ကြားကို လှေဖြင့်ကူးကာ သွားကြသည်ဟု အာရကန်မလေးရှား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကော်မတီ (Ethnic Rohingya Committee of Arakan Malaysia)မှ ဥက္ကဌ မိုဒ်ရာဖစ်ခိုင် ရူးလ်ဘာရှာက Free Malaysia Today ကို ပြောခဲ့သည်။ ''သူတို့က (ခိုးဝင်မည့်သူများက) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ Sabrang ဒါမှမဟုတ် Teknaf ကနေ ရေလမ်းခရီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက မောင်တောမြို့ကို သွားကြတယ်။ မောင်တောကနေ ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ ဧရိယာကို နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက် ကားနဲ့ဆက်သွားကြတယ်''ဟု မိုဒ်ရာဖစ်ကဆိုကြောင်း FMT က ရေးသားထားသည်။ ဤသည်ကိုကြည့်လျှင် အကြမ်းဖက်သမားတို့သည် လုံခြုံရေးနှင့် ခြံစည်းရိုး အလွန်အားနည်းသည့် ဟာကွက်ကို အသုံးချကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ဝင်ထွက်နေကြသည်မှာ ပေါ်လွင်လှပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီအရေးကိုပြောကြလျှင် လိုလားသူများက ရခိုင်ဘုရင် လက်ထက်က တည်းက စတင်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုမည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံဘဝတွင် မွေးရပ်မပြန်တော့သည့် လယ်သမားဘင်္ဂါလီများစုကာရွာတည်၍ နေခဲ့ကြသည်ဟု ငြင်းခုံကြမည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမတိုင်မီက အစိုးရကိုယ်တိုင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ဝှိုက်ကတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ထောက်ပြကြလေမည်။
အခြားတစ်ဖက်ကမူ နှစ်ရှည်လများ အဂတိလိုက်စားခဲ့သည့် အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများ၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုများကြောင့် အလွယ်တကူ နိုင်ငံသားဖြစ်သူများရှိခဲ့ဟု ပြောသူများမည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ငွေသိန်းဂဏန်းယူကာ မြန်မာပြည့်အနှံသို့ ခိုးသွင်းခဲ့သည့် အခိုင်အမာ သတင်းများကိုလည်း ထပ်မံ ကိုးကားမည်။ နိုင်ငံအတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ခိုးဝင်လာလိုက်၊ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ပြန်ပြေးလိုက်နှင့် တစ်ကြိမ်ပြန်ပြေးလိုက်တိုင်း မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် သားစဉ်မြေး ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုသူချည်းသာ ဖြစ်နေသည်မှာ နိုင်ငံတကာက မသနား သနားအောင် တမင်လုပ်ဇာတ်ခင်း နေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ပြောကြမည်။ (လက်တလောတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မှ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် 'မြန်မာပြည်မှ ရိုဟင်ဂျာ' ဟု ရေးမပေးသည့်အတွက် ဒုက္ခသည်အဖြစ် စာရင်းမပေးသွင်းသူများလည်း ရှိနေသည်။)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြသော်လည်း အလုပ်အကိုင်ရှားပါး ကာ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သည့်အပြင် ကာလကြာရှည် ခွဲခြားဆက် ခံခြင်းများကြောင့် အဘက်ဘက်မှ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေကြသည်ဟုဆိုသော အသိုင်းအဝန်းတွင် ကလေးတစ်ပြုံတမနှင့် မိုးကျရွှေကိုယ် မိသားစုများ အလုံးအရင်း ကြီးထွားနေခြင်းမှာ တစ်ချက်ကိုယုံလျှင် ကျန်တစ်ချက်မှာ ယုံကြည်စရာမရှိနိုင် ဖြစ် နေသည်ဟု ဆိုကြမည်။
ယခုနောက်ဆုံး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နိုင်ငံအကြား သဘောတူညီထားသည့် ၁၉၉၃ခုနှစ် ဒုက္ခသည်စိစစ် လက်ခံရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီ ချက်အတိုင်း စိစစ်လက်ခံသွားရန် အသင့်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် အထုပ်ကိုယ်စီဆွဲကာ ပြည်တော်ပြန်သူလိုများ အလျှိုလျှိုပေါ်လာ၍ ''ဘာကြောင့် ပြန်သလဲ''ဟု လိုက်မေး ရသည်အထိ ဖြစ်နေခြင်းမှာ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိသဖြင့် ကိုယ့်မြေပေါ် ကိုယ်ပြန်လိုကြ ခြင်းမှာ သဘာာဝမဟုတ်လောဟု မေးခွန်းထုတ်ပြ ပေလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်း၊ မီဒီယာလောကနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ဘင်္ဂါလီများကို ကရုဏာသက်အားပိုနေပြီး ဘင်္ဂါလီတို့ရန် စိုးထိတ်သော မြန်မာ နိုင်ငံသားအများစုမှာမူ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေးအတွက် စုတ်တသပ်သပ်ဖြစ်ကာ အမှန်တကယ်လုံခြုံသည့် အဆင်မြင့်ခြံစည်းရိုး မြန်မြန်ပေါ်လာရေးကိုသာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဆုတောင်းနေကြလေသည်။
ဤနေရာတွင် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာအများစုနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများက မနှစ်သက်၍ ကန့်ကွက်ပြောဆိုလေ့ရှိသော 'အမုန်းစကားဖြန့်ဝေခြင်း' ဆိုသည့် စကားရပ်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုကလည်း မိမိနိုင်ငံမှ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို လုံးလုံးလျားလျား မျက်ကွယ်ပြုကာ(ထိန်ချန်ကာ) တစ်ဖက်သတ် သတင်းများရေးသားခြင်း၊ တစ်ဖက်သတ် လိုရာဆွဲတွေးကာ ပြောဆိုနေခြင်းများသည်လည်း 'အမုန်းစကား ဖြန့်ဝေခြင်း' တစ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်ဟုသာ ယုံ ကြည်ကြနေ လေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီအရေး အပေါ်တွင် အလားတူအကျပ်အတည်းမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့၊ ရင်ဆိုင် နေရဆဲဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများအပေါ် တုံ့ပြန်ပုံကလည်း တစ်ချက်မျှ ငဲ့ကြည့်စရာ ကောင်းလှ ပေ၏။
(1) Why Some Chinese-American Agree with Trump's Muslim Travel Ban.
(2) British PM slams Muslim countries for banning entry by Israelis.
(3) Rohingya are illegal immigrants of refugee: Rajnath.
(4) Police looking into possible presence of Malaysian fighters in Myanmar.
(5)Malaysian fighters could enter Myanmar through underground channels.